Otu esi etinye Desktop Plasma KDE na Fedora 35 - LinuxCapable
Otu esi etinye KDE Plasma Desktọpụ na Fedora 35
October 20, 2021 October 16, 2021 by Jọshụa James
Wụnye KDE Plasma Desktọpụ
Otu esi emelite Desktop Plasma KDE
Otu esi ewepu (wepu) KDE Plasma Desktop
N'okwu Fedora, nke a bụ Gnome. E wezụga nkwalite eserese na mgbanwe, ọ bụkwa ebe dị fechaa, ngwa ngwa, dịkwa larịị nwere arụmọrụ dị elu ma e jiri ya tụnyere kọmpụta ndị nwere ụfọdụ Nkesa Linux. Agbanyeghị, na Fedora 35 nwere Gnome 41 kachasị ọhụrụ, nhọrọ ahụ ga-agbadata na mmasị onwe onye n'ozuzu ya.
Na njedebe nke nkuzi, ị ga-amụta Otu esi etinye Gburugburu Desktọpụ KDE na sistemụ Fedora 35 gị.
Ntinye nke KDE dị mfe, na nzọụkwụ mbụ bụ imepe ọnụ ọnụ gị wee jiri iwu na-esonụ:
N'ozuzu, nha nbudata dị n'okpuru 400MB, yana ohere ọzọ achọrọ ma emesịa nwụnye dị gburugburu 1.3GB nke bụ ọkọlọtọ maka gburugburu desktọọpụ ọ bụla ọzọ.
Nwụnye ga-edozi ihe niile. Naanị ihe ị ga - eme bụ imecha. Ozugbo emechara, malitegharịa usoro gị.
Ozugbo ịmalitegharịrị sistemụ Fedora gị, ị ga-abịa na ihuenyo nbanye, nke yiri nke mbụ. Agbanyeghị, site na ndabara, nrụnye agbanwebeghị na gburugburu desktọpụ ka ọ bụrụ Plasma. Nhọrọ, ị nwere ike họrọ X11 ma ọ bụ Wayland. Nyere ọganihu na nkwado Wayland, a na-atụ aro ya karịa, mana ọ bụrụ na ị ga-enwe nsogbu, laghachi azụ na X11.
Iji weta nhọrọ gburugburu desktọpụ, pịa "bọtịnụ akara akara" n'akụkụ aka nri ala.
Na-esote, gbanwee site na GNOME ndabara gaa na nke ọ bụla Plasma Wayland (Akwadoro) or Plasma X11.
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ mgbanwe UI ole na ole. Ụlọ ọrụ ahụ dị ugbu a ka ụdị ọrụ ọrụ windo karịa, yana mgbakwunye ndị ọzọ na akuku aka nri elu nke ọrụ ebe ngosi oge dị. Maka ndị ọrụ na-agagharị na gburugburu Windows, nke a ga-enwe mmetụta enyi karịa.
Iji kwado nrụnye, ị nwere ike ịchọta nke gị "ozi sistemu" iji kwado nkọwa nke sistemụ arụmọrụ KDE na Fedora 35. Ngwungwu ọzọ dị mma ịwụnye bụ Neofetch. Iji tinye ngwungwu a, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị.
Dịka nsonaazụ dị n'elu gosipụtara, ị tinyela KDE Plasma 5.22 nke ọma na Fedora 35.
Maka mmelite n'ọdịnihu maka desktọpụ Plasma KDE na ngwugwu Fedora 35, mee iwu dnf ọkọlọtọ.
Iwepụ gburugburu desktọpụ nwere ike ghara ịdị njọ. Ndụmọdụ kachasị mma mgbe niile bụ idobe okirikiri desktọpụ ọzọ wee gbanwee n'etiti ha, kwado data gị wee mee nke ọhụrụ, dị ọcha nke sistemụ arụmọrụ mbụ (Fedora 35). E jiri ya tụnyere nkesa ndị ọzọ, Fedora dị ntakịrị mma, mana ka ekwela ka nke a duhie gị.
Iji wepu akara niile nke KDE, jiri iwu na-esonụ.
Ozugbo emechara, malitegharịa gburugburu desktọpụ gị site na iji iwu njedebe na-esote.
Mgbe ịlaghachi na ihuenyo nbanye gị, a ga-ahọrọ ndabara GNOME tupu nrụnye KDE. Nbanye na ihe niile kwesịrị ịlaghachi na nkịtị, Otú ọ dị, atụla gị anya ma ọ bụrụ na nsogbu bilitere. N'oge nkuzi na ntinye ọhụrụ nke Fedora 35, iwepụ KDE yiri ka ọ na-eweghachi ihe niile na nkịtị na-enweghị mmetụta ọ bụla.
Categories Fedora Tags gburugburu Desktọpụ, Fedora 35, Gburugburu Desktọpụ Plasma KDE Mail igodo
Otu esi ebudata & Wụnye Ubuntu 21.10 Imish Indri
Echiche 7 na "Otu esi etinye KDE Plasma Desktọpụ na Fedora 35"
October 19, 2021 na 4: 16 am
Ị nwere ike iji Fedora KDE Plasma spin ma wụnye nke ahụ kama ịgbanye Workstation (GNOME).
October 19, 2021 na 8: 32 am
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji KDE, MATE, ma ọ bụ ọzọ ọzọ ga-abụ ụzọ ka mma iji gaa iji SPINS n'ezie. Ọ dị mma, Scott.
Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta nhọrọ dị iche iche, usoro a ga-aka mma.
November 7, 2021 na 6: 10 am
Kedu maka nkuzi nwụnye kde kacha nta?
November 17, 2021 na 2: 42 am
Hụrụ ntụkwasị obi na Polish nke Fedora 35 n'anya.
Dị ka MATE ka. Mana, Mate enweghị mkpesa Gnome ma ọ bụ Plasma nwere.
November 17, 2021 na 7: 26 am
Daalụ maka ozi ahụ, Scott.
Ekwenyere m, KDE Plasma mara mma, mana m na-amasịkwa MATE nke ọma ka m kewaa.
Mana, maka desktọpụ, a na-eji Fedora dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala m kwa ụbọchị site na Debian/Ubuntu.
November 27, 2021 na 7: 52 am
echiche m? Ndị mmadụ na-eji Linux chọrọ ikpo okwu mgbasa ozi privet nke na-arụ ọrụ naanị na Linux. oma m unu huru ihe na-eme mgbe unu nyere onye obula ekwentị? omg.
November 28, 2021 na 5: 04 pm